जसपाभित्र अर्काे विवाद, बाबुरामको एक्सनलाई उपेन्द्रको काउन्टर Canada Nepal
जसपाभित्र अर्काे विवाद, बाबुरामको एक्सनलाई उपेन्द्रको काउन्टर
क्यानाडा नेपाल जेठ ५ २०७८
काठमाडौं । मुलुक कोरोनाभाइरस संक्रमणको चपेटामा छ । नागरिक कसरी सुरक्षित रहने र परिवारलाई राख्ने भन्नेमा चिन्तित् छ । तर, देश र नागरिकको अभिभावकत्वको भूमिका निभाउनु राजनीतिक दलहरु आन्तरिक किचलोमा छन् ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि आन्तरिक किचलोमा फसिरहेको छ । विशेषगरी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच किचलो देखिएका बेला अब उपेन्द्र र डा. बाबुराम भट्टराईबीच पनि मनमुटाव बढेको देखिन्छ ।
यादव र डा. भट्टराई एउटै समूहका नेता हुन् । तर, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने लालसमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई सुटुक्क भेटेपछि यादव रिसाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुुष्ट रहँदै आएको यादव समूहका नेता डा. भट्टराई मध्यरातमा दुई दुईपटक बालुवाटार छिरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न ओलीसँग आग्रह गरेको विषय एमालेका नेता महेश बस्नेतले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै सबैको जानकारी आयो । यो विषय डा. भट्टराईले यादवसहित आफ्नै पार्टीका नेताहरुमाझ गुपचुप राखेका थिए ।
ओली सरकार ढाल्न लागिपरेका यादव अहिले डा. भट्टराईप्रति सशंकित बनेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा बोकेर लविङ गर्न बालुवाटार गएको भन्ने विषयलाई ढाकछोप गर्ने डा. भट्टराईको प्रयासलाई यादवले महत्व दिएनन्, बरु पार्टीका सदस्यहरुलाई झुक्याएर बालुवाटार छिरेका डा भट्टराईप्रति असन्तुष्ट बने ।
डा. भट्टराईप्रति विश्वास गर्न नसकेका यादवले उनलाई काउन्टर दिन महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरे । मंगलबार पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्दै अन्य पार्टी नेतृत्वको सरकारमा नजाने बरु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनाउन पहल गर्ने भन्दै ठाकुर र यादवले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । यसपछि ठाकुर र यादवसँग डा भट्टराई चिढिएका छन् ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई भेटेपछि ठाकुर र यादवबीचको सम्बन्ध सुध्रिने बाटोमा देखिएको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने गरी ठाकुर र यादवले हस्ताक्षर गरेर मंगलबार जारीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सररका बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् । ओली सरकार ढाल्न लागिपरेका डा. भट्टराई र यादवबीच मनमुटावले अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीचको दूरी घटाएको छ ।
जेठ ५, २०७८ बुधवार १३:५४:२४ बजे : प्रकाशित